Nhau - Unoda kupinza RFID microchips RFID Tag muchipfuyo chako?
Yakarukwa/Fabric Rfid Wristband
RFID Tambanudza Elastic Wristband/Bracelet
Zvimwe Rfid Wristband
13.56MHZ RFID Kadhi
860mhz ~ 960mhz UHF kadhi
Dual Chip RFID Kadhi
Bata Chip Card
UHF Silicone tag yekuwachira
Pamusoro peMetal NFC Tag
NFC Reader Munyori
Mobile NFC Reader Munyori
Mukwende tag/Hang Tag
PVC Key fob/Snap-off kiyi Tag
RFID Kuvharira Zvigadzirwa
RFID Kuvharira Kadhi Wallet
RFID Kuvhara Kadhi
Kuvhara Kadhi Sleeves
ID Kadhi Mubati
Tembiricha Muviri Face Recognition
Iwe unoda kuisa jekiseni RFID microchips RFID Tag muchipfuyo chako?
Nguva pfupi yadarika, Japan yakapa mirairo: kutanga kubva munaChikumi 2022, zvitoro zvezvipfuyo zvinofanirwa kuisa ma microelectronic machipisi ezvipfuyo zvinotengeswa. Kare, Japan yaida katsi nembwa dzinobva kunze kwenyika kuti dzishandise mamicrochips. Kubva muna Gumiguru apfuura, Shenzhen, China, yakashandisa "Shenzhen Regulations on the Implantation of Electronic Tag for Dogs (Trial)", uye imbwa dzose dzisina chip implants dzichaonekwa sembwa dzisina kubvumirwa. Kubva pakupera kwegore rapfuura, Shenzhen yakawana kufukidzwa kuzere kwembwa rfid chip manejimendi.
Nhoroondo yekushandisa uye ikozvino chimiro chepet material chips. Kutaura zvazviri, kushandiswa kwema microchips pamhuka hakusi kwechienzi. Kuchengeta mhuka kunoshandisa kunyora ruzivo rwemhuka. Zoologists vanodyara mamicrochips mumhuka dzesango sehove neshiri nekuda kwesainzi. Tsvagiridzo, uye kuidyara muzvipfuyo zvinogona kudzivirira mhuka dzinovaraidza kuti dzisarasika. Parizvino, nyika dzepasirese dzine mitemo yakasiyana-siyana yekushandiswa kweRFID pet microchips tag: France yakataura muna 1999 kuti imbwa dzine mwedzi mina dzinofanira kubaiwa ne microchips, uye muna 2019, kushandiswa kwema microchips ekitsi kunosungirwawo; New Zealand yaida kuti imbwa dzinopfuyiwa dzisimerwe muna 2006. Muna Kubvumbi 2016, United Kingdom yaida kuti imbwa dzose dziiswe mamicrochips; Chile yakaita iyo Pet Ownership Liability Act muna 2019, uye inoda kusvika miriyoni imwe katsi nembwa dzakaiswa nemicrochips.
RFID tekinoroji saizi yezviyo zvemupunga
Iyo rfid pet chip haisi iyo inopinza-yakapinza-yakapinza-sepepa-yakafanana zvinhu izvo vanhu vazhinji vanofungidzira (sezvakaratidzwa muFigure 1), asi cylindrical chimiro chakafanana nerefu rezviyo mupunga, unogona kuita diki se 2 mm mudhayamita uye gumi. mm kureba (sezvinoratidzwa mumufananidzo 2). . Ichi chidiki che "rice tsanga" chip i tag inoshandisa RFID (Radio Frequency Identification Technology), uye ruzivo rwuri mukati runogona kuverengwa kuburikidza ne "muverengi" chaiwo (Mufananidzo 3).
Kunyanya, kana chip ichiiswa, iyo ID kodhi irimo uye ruzivo rwekuzivikanwa rwemupfuri rwunosungwa uye kuchengetwa mudhatabhesi rechipatara chemhuka kana sangano rekununura. Kana muverengi ashandiswa kunzwa chipfuyo chakatakura chip, chiverenge Iyo mudziyo uchagamuchira ID kodhi uye woisa iyo kodhi mudhatabhesi kuti uzive muridzi anoenderana.
Pachine nzvimbo yakawanda yekusimudzira mumusika wepet chip
Zvinoenderana ne "2020 Pet Indasitiri White Paper", huwandu hwembwa dzinopfuyiwa nekatsi dzinopfuyiwa mumaguta eChina dzakapfuura mamirioni zana gore rapfuura, kusvika 10.84 miriyoni. Nekuwedzera kunoramba kuchikwira kwemari inotambirwa nemunhu uye kuwedzera kwezvinodiwa zvepfungwa zvevechiduku, zvinofungidzirwa kuti panosvika 2024, China inenge yava nekatsi nembwa dzinosvika mamiriyoni 248.
Iyo kambani inobvunza nezvemusika Frost & Sullivan yakashuma kuti muna 2019, pakanga paine mamirioni makumi mashanu eRFID ma tag emhuka, ayo mamirioni gumi nemashanu aive. RFID girazi tube tags, Mhete dzetsoka dzenjiva dzinosvika miriyoni matatu, uye mamwe ese aive maeki enzeve. Muna 2019, chiyero chemusika weRFID mhuka tag chasvika 207.1 miriyoni yuan, ichiverengera 10.9% yemusika wakaderera-frequency RFID.
Kudyara mamicrochip mumhuka dzinovaraidza hakurwadzi kana kudhura
The dzinovaraidza microchip implantation nzira iri subcutaneous jekiseni, kazhinji pamusoro rokumusoro shure mutsipa, apo marwadzo tsinga hadzina kugadzirwa, hapana yokutindivadza inodiwa, uye katsi nembwa hazvizonyanyorwadza. Muchokwadi, vazhinji varidzi vezvipfuyo vanosarudza kuomesa mhuka dzavo. Jekiseni chip muchipfuyo panguva imwe chete, saka chipfuyo hachizonzwa chero chinhu kune tsono.
Mukati mekugadzirwa kwepet chip implantation, kunyangwe iyo sirinji tsono yakakura kwazvo, iyo siliconization process inoenderana nemishonga uye hutano zvigadzirwa uye zvigadzirwa zverabhoritari, izvo zvinogona kuderedza kuramba uye kuita jekiseni nyore. Muchokwadi, mhedzisiro yekusima microchips mumhuka dzinovaraidza dzinogona kuve kubuda ropa kwenguva pfupi uye kurasikirwa nebvudzi.
Parizvino, iyo yepamba pet microchip implantation mubhadharo uri mukati me200 yuan. Hupenyu hwesevhisi hwakareba semakore makumi maviri, kureva kuti, mumamiriro ezvinhu akajairika, chipfuyo chinongoda kuisa chip kamwe chete muhupenyu hwake.
Mukuwedzera, iyo pet microchip haina basa rekuisa, asi inongotora chikamu mukurekodha ruzivo, izvo zvinogona kuwedzera mukana wekuwana yakarasika kati kana imbwa. Kana basa rekuisa richidikanwa, GPS collar inogona kutariswa. Asi ingave iri kufamba nekatsi kana imbwa, tambo ndiyo tambo yeupenyu.
Nguva yekutumira: Jan-06-2022
Fekitari Wedzera :5Level C Kuvaka Bao'guan Tech Park,Guanlan,Longhua Dunhu,Shenzhen,China.
Factory Wedzera :6th Floor, Zhongxing 4th Road, Hetang Town, Pengjiang District, Jiangmen Guta, Guangdong Province, China.
© Copyright - 2010-2020 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.